Home > Tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB mora vidy sy vidin'ny dia
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakilan'ny lamasinina SNCB mora vidy ary Vidin'ny fitsangatsanganana SNCB sy ny tombony.
Ny lamasinina matetika no any Bruxelles – Ghent, Antwerp – efa nampiasaina, Brussels – Namur. Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina any Eropa amin'ny alàlan'ny lamasinina SNCB.
Number 1: Mandefasa mialoha ny tapakilan'ny SNCB arak'izay azonao atao
Ny vidin'ny SNCB train tickets miakatra rehefa manakaiky ny andro fitsangatsanganana. Azonao atao ny manangom-bola amin'ny alàlan'ny famandrihana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB araka izay azo atao amin'ny andro fiaingana. Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB dia misy hatramin'ny voalohany 3 ny 6 volana mialoha ny fialan'ny lamasinina. Ny famandrihana mialoha dia manome antoka fa hahazo ny tapakila fiaran-dalamby SNCB lafo indrindra ianao. Voafetra ihany koa ny isa, ka vao haingana ianao no manafatra, ny mora kokoa ho anao. Mitahiry vola amin'ny tapakilan'ny fiaran-dalamby SNCB, mividy ny tapakilan'ny ASAP.
Number 2: Mandehandeha amin'ny SNCB mandritra ny fotoana tsy an-tampony
Number 3: Omeo baiko ny tapakila amin'ny SNCB rehefa azonao antoka ny fandaharam-potoanananao
Number 4: Vidio ny tapakila SNCB amin'ny Save A Train
Ny tapakilan'ny SNCB dia manomboka amin'ny € 2,5 ka hatramin'ny € 20 ho an'ny dia lamasinina tokana. The vidin'ny tapakila fiaran-dalamby SNCB Miankina amin'ny karazana tapakila fidianao ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
1) Tonga any amin'ny ivon'ny tanàna ianao. Tombony iray amin'ny fiaran-dalamby SNCB raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Fiaran-dalamby SNCB ary fitsangatsanganana lamasinina hafa rehetra na aiza na aiza ao amin'ny tanàna hatrany afovoany an'ny tanàna manaraka. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Brussels, Antwerp, efa nampiasaina, na Liege, tombony lehibe amin'ny fiaran-dalamby SNCB ny fijanonana afovoan-tanàna!
4) Mora kokoa ny tontolo iainana ny lamasinina rehefa mampitaha ny lamasinina sy ny fiaramanidina ianao, ireo lamasinina dia hivoaka eny ambony. Mandoto ny rivotra ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny karbonina avo lenta. Ny lamasinina raha ampitahaina dia manome be tsy fandotoana karbonika fa ny fiaramanidina.
Ho an'ny olom-pirenen'i Belzika, misy karazana famandrihana isan-karazany, ny tapakila Unlimited Season, ary ny vanim-potoana mahazatra. Ho an'ny International dia manolo-kevitra ny hividy ela be mialoha izahay ary avy eo hanana ny safidy mora indrindra ianao.
Ny tobin'ny Bruxelles an'ny SNCB dia Bruxelles – Central, izay eo afovoan'i Belzika.
Miala any Ghent ny fiaran-dalamby SNCB Ghent Saint Pieters peo, which is the third-largest city in Belgium and the largest in Flanders.
Liege, Liege Guillemins no tobin'ny gara afovoany SNCB. Ary noho izany, Ny gara gara Liege dia mampitohy an'i Belzika amin'ireo firenena mifanila aminy, making it one of the busiest train stations in Wallonia. Ary, raha mikasa ny handeha ho any Alemana ianao, Frantsa, Luxembourg, na Netherlands avy any Belzika, tsara kokoa raha tehirizo mialoha ny tapakilan'ny lamasinina SNCB anao.
efa nampiasaina (Brugge – Anaran-tanàna mitovy amin'ny fiteny malaza iray hafa) gara no fiantsonan'ny lamasinina SNCB hafa any Flanders. Ohatra, avy any Bruges, azonao atao ny manafatra ny tapakilan'ny lamasininao mankany amin'ny hafa destinos any Belzika: Ghent, Antwerp, and Brussels in less than an hour. The Bruges train station is at a 20 minitra’ mandeha lavitra ny afovoan-tanàna, ary ny kianja Old City Markt tsara tarehy.
ianao afaka reserve ny fantatroamin'ny mialoha an-trano SNCB fiarandalamby. ianao dia manovoza seza aorian'ny famandrihana, saingy tsy ilaina izany.
No. Tsy misy Free Wifi Internet amin'ny lamasinina SNCB. Afaka mankafy Wi-Fi maimaim-poana ao amin'ny gara SNCB ianao.
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.